Keytlin Dzhenner ngaphambi nangemva kokuhlinzwa
Ngalowo nyaka, izithombe Keytlin Dzhenner kwaqala ukuvela ezincwadini eziningi: omagazini ecwebezelayo, amaphephandaba, ophuzi, futhi wonke Inthanethi uqalile ukuxoxa lo muntu ... Kuyini empeleni?
Biography Keytlin Dzhenner
Kumayelana Keytlin Dzhenner ngaphambi nangemva kokuhlinzwa. Phela, lo muntu wesifazane uvele kuphela ngonyaka odlule, futhi eqinisweni bonke zeminyaka yakhe 65, kwaba Bruce Jenner, athlete waseMelika odumile.
Bryus Dzhener yake abadumile kakhulu inqotshwe ukuthi uzothatha indondo yegolide eMidlalweni Yama-Olympic e-Montreal, ukushaya irekhodi ngesikhathi esifanayo owaziwa umsubathi Soviet UNikolai Avilov. Nokho, ngemuva kokuwina ezemidlalo yakhe umsebenzi zabhuntsha. Kodwa lokho akuzange kuwumise Bruce ahlale abadumile eMelika. Ngo-1991, washada Kris Jenner, okuyinto namuhla sibonga abadumile kakhulu show wakhe 'Uhambisana ne Kardashians. " Bruce Chris azalelwa namadodakazi amabili bashada, Kendall futhi Kayli Dzhenner, okuyinto namuhla onobuhle owaziwa kakhulu. Bruce izingane eziyisithupha nje.
Ngo-2013, ngemva kokuhlukana Chris waqala ukwelashwa i-hormone, ukuze ekugcineni ukulungiselela ukuba ukuhlinzwa isikhumba. Owayeyintombi yakhe unkosikazi ukuyichaza ngezinkinga zakhe, kodwa naye wake wathi mayelana nale ndaba. Ezinsukwini ezimbalwa nje ngaphambi kokuba sihlinzwe, Bruce wanika i interview lapho ethi wacabanga ngisho ukuzibulala, kodwa ekugcineni wanquma ukuba abe yini wafikelwa konke ukuphila kwakhe - owesifazane.
Ukuvela Keytlin Dzhenner
Ngalowo nyaka, osesembozweni edumile umagazini ecwebezelayo Vanity Fair isithombe uvele Keytlin Dzhenner. The Journal Indaba Keytlin Dzhenner yanyatheliswa futhi isihloko sihloko kwakuzwakala: "Ngibizele Caitlin!". Ukuze Vanity Fair kwakuyizwi kobakhe umuntu wokuqala eseke ikhava.
Ngemva kwalokho, abaningi baqala ukugxekana Bruce ukuthi kwaba Stunt emphakathini, ngoba uphishekela udumo, kodwa yini noma cha lesi inkazimulo ukuhlushwa okunjalo, imisebenzi eziyinkimbinkimbi, zokwelapha, lapho isidlulile?
Empeleni, ukuguqulwa lwaba ngowesifazane kwaba inqubo nzima. Ngaphambi nangemva kokuhlinzwa kudingeka asebenze ngakulona, emzimbeni wakhe, ku nesimo sakhe sengqondo. eminyakeni engu-65, kancane kancane baba ngakho ngubani wayezozalelwa. Uma siqhathanisa ukuphila Keytlin Dzhenner ngaphambi nangemva kokuhlinzwa, singasho ukuthi ngemuva kokuhlinzwa waba ojabulisayo kunabo bonke engu-65 ayichitha umzimba yomunye.
Konke okwenzeka Bruce - kuba indaba yempumelelo yakhe. Keytlin Dzhenner wakunqoba zonke izinkambiso wamemezela umphakathi, enqobe ekupheleni, futhi yena.
Umlando ushintsho Bruce Jenner e Keytlin Dzhenner
With kweminyaka 8 Bruce wazizwa yinto engaziwayo. Lokhu kubonakala ngezindlela eziningi. Wayethanda ukuya bagqoke up in izingubo zabesifazane kanye ukudlala ngonodoli. Lapho esemusha, waqala ukuthatha ama-hormone, kodwa wayeka masinyane. Engxoxweni aba nayo yamuva ne Bruce wavuma ukuthi ezenzakalweni eziningi ezaba khona kwezenhlalo kamuva waya eMhlanganweni nomkakhe, u-Chris, noma amadodakazi, wayegqoke tights Tuxedo futhi ngezinye izikhathi ubhodisi. Nokho, nakuba umkakhe zokugcina futhi wasola, mane babengamazi.
Eminyakeni 60, Bruce baqala ukucabanga ukuthi ngeke ukwazi ukuphila impilo yami yonke emzimbeni womunye umuntu, ukuba lokho yena engazizwa. Ngemva kweminyaka emihlanu, ekugcineni waba yini wafikelwa. Keytlin Dzhenner ngaphambi nangemva kokuhlinzwa ukhathazekile kakhulu ngesimo lomzimba wakhe. Kodwa Ukuhlinza kwaphumelela.
Isimo sezocansi Keytlin Dzhenner
Lapho kuxoxwa naye wathi neze ungungqingili. umshado wakhe siqotho, yilowo nalowo wesifazane empilweni yakhe, kungakhathaliseki ukuthi ungumkakho yakhe noma senkosikazi, wayethandwa. Uyabathanda nezingane zakhe eziyisithupha, ababa imishado ambalwa.
Kwelinye okukhipha yayo yokuqala kwakulandelwa owesifazane, Kendall futhi Kayli Dzhenner. Ngesikhathi okukhiphayo inkanyezi entsha uvele ingubo emhlophe ngu Versache, okuyinto egqoka ngaphambili futhi Andzhelina Dzholi.
Keytlin Dzhenner namuhla
Namuhla, Kaitlin ngenkuthalo uhlanganyela izenzakalo zenhlalo, evame ukusinikeza izingxoxo nokuhlanganyela imibukiso ehlukahlukene. Ehlobo, wahlanganyela umbukiso ngokoqobo ngokuthi ngingubani Cait, okuyinto siye sazibonakalisa ngaphandle makeup. Keytlin Dzhenner ngaphandle ukwakheka naponimaet kakhulu Bruce.
Kuyi-Internet zikhona izihloko eziningi nezindaba ezimayelana Caitlin. Ngokusho amahlebezi, kungaba ubuso brand British Victoria Beckham.
Nsuku zonke On the internet zikhona izithombe ezintsha ka Caitlin: isudu ukugeza ekhaphethini obomvu, endaweni yokudlela nomkhaya wami ... Kubonakala sengathi namuhla akusho ukuphila sasivumela ayisiphekupheku, njengomoya usaziwayo. Life Keytlin Dzhenner ngaphambi nangemva kokuhlinzwa ishintshile kakhulu.
Keytlin Dzhenner nomkhaya wakhe
Zonke Jenner umkhaya omkhulu ezama nokugcina ke ngemva kokuhlinzwa. Ngasekuqaleni abalandeli umndeni Kardashian-Jenner iphathwa abakwethembi ngokwedlulele Caitlin, ukuthi ayikashintshi namuhla. Abaningi wabhala ku-blog yakhe, indlela abafisa abantwana bakwa-Bruce, futhi amanye aze ngisho ukushiya amazwana emakhasini abantwana bakwa-Bruce ngamazwi ukwesekwa. Yiqiniso, Jenner umndeni kwakunzima ukwamukela iqiniso lokuthi Bruce Jenner waba owesifazane. Omunye wabantu bokuqala wayeqhutshwa owayengunkosikazi ngomfazi Bruce Kris Jenner, owathi: ". Kwakunzima ukwamukela ukuthi umuntu oxoxa uhlela ukuba siguge ndawonye ukukhulisa abazukulu, waphenduka ukuphila kwakhe ngenxa yabo bonke 180 degrees"
Kodwa ngesikhathi esifanayo lithi Keytlin Dzhenner wahlanganiswa umndeni wakhe, ngisho wabuyisana owayeyintombi yakhe unkosikazi Kris Jenner, ayizalela ohlukanisile ukuze ushintshe ubulili babo. Lokhu kuboniswa selfie eminingi, okuyinto enza namalungu omndeni wakhe.
Keytlin Dzhenner ngokuphila ngaphambi nangemva kokuhlinzwa
"Empeleni, Bruce uye lied njalo. Kikho koke ukuphila kwakhe ayihlala amanga, zonke izinsuku zokuphila kwakhe yaphenduka imfihlo enkulu. Ingabe Caitlin kuyinto azikho izimfihlo. Ngithemba ngobuqotho ukuthi Caitlin kungaba umuntu ongcono kakhulu kunokwaziswa Bryus Dzhenner. Mina kakhulu sibheke phambili ngempilo entsha "- ethi Keytlin Dzhenner ngokuphila ngaphambi nangemva kokuhlinzwa.
UGabriela Abakhandi: Filmography, biography, izithombe
Keyt Moss ebusheni bakhe. supermodel British Keyt Moss nomlingisikazi
Gennady Truhanov: Biography nomsebenzi zezombusazwe
Biography Vladimir Epifantseva. umndeni umlingisi sika. izindima engcono
Onobuhle abaziwayo: amagama, isilinganiso nemingcele. Odumile oyisibonelo Russian
Eqolo endlini emhlabeni. Abaholi Forbes amazinga
Kuyini ukulima nokuthi uyoba yini umphumela yokwemukela layo umzimba?
Imishini yokugeza AEG: izici, ukubuyekezwa, ukubuyekezwa. Imishini yasendlini
Impilo yomphakathi: definition, izici kanye nezici
Isithonjana "udonga inviolable": incazelo kanye nomlando
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ushintshe umsindo Windows 7 ukubingelela: izindlela eziyisisekelo
Ethosiwe trout - izindlela sokulungiselela
Nezimfanelo ezingavamile zomunye bemvelo. Sisebenta Njani ukuzalanisa iqanda